Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa waxay ku dartay afar diyaaradood oo cusub oo ah Airbus A350-900 oo ay ku raaci doonto maraakiibta
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Airbus 'A350-900 ayaa loo qorsheeyay inay adeeg la gasho astaanta muhiimka ah ee Lufthansa laga bilaabo qeybtii hore ee 2022-ka, taasoo xoojineysa bixinta qaaliga ah ee diyaaradda shanta xiddig.
Kooxda Lufthansa waxay saxiixday heshiisyo fududaynaysa afar diyaaradood oo dheer oo nooca Airbus A350-900.
Diyaaradaha ayaa kaalin weyn ka qaata sii jiritaanka xitaa iyada oo loo marayo 30 boqolkiiba shidaalka iyo kaydinta CO2.
Kooxda Lufthansa ayaa qorshaynaysa in ay soo dirto diyaarad cusub oo Airbus A350-900 ah qeybtii hore ee 2022-ka.
The Kooxda Lufthansa wuxuu dardar gelinayaa casriyeynta maraakiibteeda dhaadheer. Kooxdu waxay heshiisyo u saxiixday afar diyaaradood oo casri ah iyo shidaal-ku-ool ah oo ah Airbus A350-900 oo ay leeyihiin Avolon, SMBC Aviation Capital Ltd. iyo Goshawk. Natiijo ahaan, kooxda A350 ee kooxdu waxay noqon doontaa 21 diyaaradood bilowga 2022.
The Airbus'A350-900 waxaa loo qorsheeyay inay adeeg la gasho astaanta muhiimka ah ee Lufthansa laga bilaabo qeybtii hore ee 2022-ka, taasoo xoojineysa bixinta lacagta qaaliga ah ee diyaaradda shanta xiddig.
Dr. Detlef Kayser, Xubin ka tirsan Guddiga Fulinta Deutsche Lufthansa AG, ayuu yiri:
“Airbus A350 waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee waqtigeenna. Shidaal aad u badan, aad u xasilloon kana dhaqaale badan kuwii ka horreeyay. Macaamiishayadu ma qiimeeyaan joogtaynta oo keliya laakiin sidoo kale khibradda duulimaadka qaaliga ah ee diyaaradan. Heshiisyada ijaarku waxay noo saamaxayaan inaan ku sii dabacsanaano qorshaynta maraakiibta oo aan si wanaagsan uga faa'iidaysano fursadaha suuqa ee gaarka ah. ”
Mataanaha-mataanaha Airbus Diyaaradaha A350-900 waxay cunaan qiyaastii 2.5 litir oo kerosene ah rakaabkiiba halkii kiilomitir ee duulayba. Taasi waxay ku dhawaad ​​100 boqolkiiba ka yar tahay kuwii ka horreeyay, oo saamayn togan oo togan ku leh raadadka kaarboonka. Diyaaradda ayaa ugu horreyntii beddeli doonta afar-matoor oo ah diyaaradda dhaadheer ee qoyska Airbus A30. Bartamihii tobanka sano, saamiga afar-matoor diyaaradood oo ku jira maraakiibta dhaadheer guud ahaan ayaa la filayaa inay hoos ugu dhacdo boqolkiiba 340. Dhibaatada ka hor, saamigu wuxuu ahaa qiyaastii boqolkiiba 15.
Intaas waxaa sii dheer, dayuuradaha cusub, ee shidaalka wax ku oolka ah waxay yarayn doonaan kharashaadka ku dhawaad ​​15 boqolkiiba marka la barbar dhigo noocyada ay beddeli doonaan.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijkeeda casriyeynta maraakiibta mudada dheer, ee Kooxda Lufthansa waxay qaadan doontaa bixinta wadar ahaan 177 diyaaradood oo gaagaaban, dhexdhexaad ah iyo kuwa dhaadheer tobankii sano ee la soo dhaafay.
Robert Charles wuxuu leeyahay,
Oktoobar 6, 2021 at 07: 33
Airbus A350 waa diyaaradda ugu dheer uguna casrisan bey'ada caalamka. Lufthansa waxay sheegtay inay oggolaatay inay kiraysato afar diyaaradood oo kuwa rakaabka ah oo dheer oo ah Airbus A350-900, iyadoo qaadaysa diyaarado cusub oo guryo la’aan ah.